ABC Slimming Belly Patch Magnetic Diet Pad Gacan-siinta Miisaanka Khafiifka ah wuxuu ku gubaa Fataha 100% Wax ku ool ah
$ 20.09 qiimaha joogtada ah $ 55.80
ABC Slimming Belly Patch Magnetic Diet Pad Gacan-siinta Miisaanka Khafiifka ah wuxuu ku gubaa Fataha 100% Wax ku ool ah gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
NET WT:10 kabuubyo sanduuq
Number Model:Miisaanka miisaanka ABC ee luminta caloosha
Isticmaal Tilmaamaha: 1. Boorsooyinka jeexjeex, soo qaado balastarka khafiifka ah. 2. Ku dhaji balastarka khafiifka ah qaybta aad rabto inaad khafiifiso, ka dibna ku dheji dhejis. 3. Hal xabbo maalin kasta, codsi dibadeed oo waara oo loogu talagalay 8-10 saacadood iyo guud ahaan koorso hal bil ah. Natiijada xitaa ka sii wanaagsan isku day koorso laba bilood ah. 4. Qaado 1 kiniin oo ah nooca 'Lida' oo ah nooc cusub maalin kasta subaxdii. 1 dhalo muddo 1 bilood ah.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 59363.
dib u eegista 59363